၁။ MyMTV (သီချင်းဗွီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု) အစီအစဉ်မှ မည်ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုမျိုးရရှိနိုင်မည်နည်း။
MyMTV (သီချင်း ဗွီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု) အစီအစဉ်မှ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များနေသော ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် အဆိုတော်များ၏ Exclusive Up To Date သီချင်း ဗွီဒီယိုအသစ်များကို အစောဆုံး ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၂။ MyMTV (သီချင်း ဗွီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု) ဝန်ဆောင်မှုများအား မည်ကဲ့သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။
MyMTV ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူလိုပါက MTV ဟု SMS တွင်ရိုက်ပြီး 8411 သို့ စာတို (SMS) ပေးပို့ရပါမည်။
၃။ Promotion ကာလ မည်မျှကြာမြင့်မည်နည်း။
Promotion ကာလအနေဖြင့် ၂၀၁၈ဒီဇင်ဘာလ(၂၆) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉မတ်လ(၂၅)ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာတို (SMS)တစ်စောင်လျှင်၂၆၃ ကျပ် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ Promotion အစီအစဉ်တွင် မည်သည့်ဆုအမျိုးအစားများပါဝင်မည်နည်း။
Promotionအစီအစဉ်တွင် အထူးဆုကြီးများအနေဖြင့် ရွှေ(၁)ကျပ်သားဆု (၃) ဆု နှင့် MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ပေါင်းမြောက်များစွာပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီးကံထူးသူများအား မဲဖောက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကံထူးသူများအား မည်သို့ရွေးချယ်ပေးသွားမည်နည်း။
MyMTV(သီချင်း ဗွီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု) Promotion အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းသူများသည် MyMTV ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခအားအနည်းဆုံး (၅) ကြိမ်အထိပေးေးဆာင်ထားပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များအား မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ဧပြီလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ဆုရရှိသူများအား ရက်နေ့တွင်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများသည် Promotion ကာလ (၂၆.၁၂.၂၀၁၈ - ၂၅.၃.၂၀၁၉) အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုပယ်ဖျက်ထားသူများအား Promotion ဆု အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရွေးချယ်ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၆။ ဆုရရှိသူများအနေဖြင့် ဆုများကိုမည်ကဲ့သို့ထုတ်ယူနိုင်မည်နည်း။
ဆုရရှိသူများအားဆုလာရောက်ထုတ်ယူရမည့် နေရာနှင့်အချိန်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆုကိုလာရောက်ထုတ်ယူရန်၊သက်ဆိုင်ရာကြေငြာမှုပြုလုပ်သောနေ့ရက်မှစ၍တစ်လအတွင်းမှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်လူကိုယ်တိုင် MPTရုံးချုပ်သို့လာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိလျှင်ဆုကိုအခြားအကျုံးဝင်သင့်လျော်သောပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
၇။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါက မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါကMPT နှင့် Contents Hub ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ဆုများအား ငွေသား (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးတူညီသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ဖြင့်လဲလှယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဆုများအားငွေသား (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးတူညီသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြင့်လဲလှယ်မှုပြုလုပ်၍မရနိုင်ပါ။
MyMTV (သီချင်းဗွီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု) ဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်လိုပါက - MTV OFF ဟု 8411သို့ စာတို(SMS) ပေးပို့ရပါမည်။
၁၀။ MyMTV Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
MyMTV Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက Contents Hub Facebook PageChat Box တွင် မေးမြန်းနိုင်သလို Customer Care Hotline Number 09-258539955, 09-258539966 တို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
1. What kind of content will you get from MyMTVService?
From MyMTV service, you will get to watch latest and hottest MTVs in SMS that can watch easily on your mobile phone.
2. How can you subscribe this service?
To subscribe,send “MTV” SMS to 8411.
3. How long does this promotion last?
Promotion period will be on December 26th, 2018 and end in March 25th, 2019.Service Charge is 263 Ks per SMS(include 5% tax).
4. What kind of prize will include in this promotion?
- Gold 1 Tical - (3) Pcs
- 3000 MPT Topup Cards - (150) Pcs
All winners will be chosen randomly and will be announced.
5. How will we choose the winners?
Customers who want to participate in our MyMTV Promotion will be paid at least (5) times for Service Charge and must be active users when we select the winners.
We will randomly choose the winner among these subscribers on April 10th, 2019.
Users who un-subscribe within the promotion period will not be considered eligible for this promotion.
6. How can you receive the prizes?
We will directly contact the winners with phone and give information about Place and Time to withdraw the prize.
To collect their prize, eligible winners must personally present their original NRC Card at MPT head office within one month from the relevant announcement date.
Failure to comply with this requirement may result to awarding of the prize to another eligible participant.
7. How do we handle complaints?
If there would be any complaints about choosing winners, the decision made by MPT and Contents Hub will only be confirmed.
8. Can customer exchange the prizes with cash or other same valued items?
Prizes cannot be exchanged in cash or any other same valued items.
9. How can you unsubscribe the service?
To unsubscribe-Please, send “MTV OFF” SMS to 8411.
10. How can you ask details about MyMTV Promotion?
You can ask detailed information at “Contents Hub Facebook Page Messenger” or Customer Care Hotline Number (09-258539955, 09-258539966).
MyMTV ပင်မစာမျက်နှာသို့ ►